Ungabathintela njani abafowunelwa kwiTelegram kwaye wazi ukuba bakuthintele | IPhone iindaba
UNacho Aragonés | | Iapps zokusebenza
Kude neyona miyalezo yemiyalezo isetyenzisiweyo okanye uthungelwano lwasentlalweni lujolise ngakumbi kwiividiyo nakwiifoto, iTelegram izibeka njengenye yeenkqubo ezizezinye kuzo zombini iindlela. Ukusuka kumaqela amawaka abantu, ukuyisebenzisa njengelifu elingenamkhawulo nelisimahla, uhamba, ngokulula, incoko nabahlobo onokuyisebenzisa nakwesiphi na isixhobo kwaye ngaphandle kokuthatha indawo nakweyiphi na, bangumzekelo omncinci iindlela zokusebenzisa iTelegram.
Kodwa ngokusetyenziswa kuza noxanduva. Sisandula ukukuxelela konke malunga nokutshixa kuWhatsApp Kwaye ngoku lixesha lokuba ufunde konke malunga nokutshixa kwiTelegram.
1 Ndimvimba njani umntu?
2 Kwenzeka ntoni xa ndivimba umntu?
3 Ndazi njani ukuba ndibhlokiwe?
4 Uyazi njani ukuba iakhawunti yakho ithintelwe kwaye kufuneka wenze ntoni?
Ndimvimba njani umntu?
Kungenzeka ukuba umntu ongafunanga ukunxibelelana nawe, ukhe. Isenokuba sisidala esidala, osithinteleyo kwezinye iinethiwekhi, okanye isenokuba ngumphambukeli obhalele igama lakho.
Ngendlela, izibizo okanye @lomsebenzisi zisesidlangalaleni kuye wonke umntu. Kananjalo nefoto yakho yeprofayile kunye negama olibekileyo (ungabeka nantoni na oyifunayo). Ke ukuba ufuna ukungabonakali, kungcono ukuba ungabinazibizo kwaye ubeke ifoto yeprofayile engabonakali okanye, ngokuthe ngqo, ungafaki nayiphi na.
Kodwa yenza lula inombolo yakho yefowuni yabiwa kuphela kwezi meko zilandelayo:
-Ukuba sele benenombolo yakho yefowuni egcinwe kwincwadi yabo yefowuni.
- Ukuba wabelana ngenombolo yakho ngokwakho (usebenzisa "Yabelana ngenombolo yam")
-Ukuba unenombolo yabo egcinwe kwi-ajenda yakho kwaye ubathumela umyalezo okanye ubatsalele umnxeba (ngokungathi bafumene iSMS okanye bakutsalele umnxeba).
Abayi kuyibona inombolo yakho phantsi kwazo naziphi na ezinye iimeko, ngokungathi ufunyenwe usebenzisa uphando lwehlabathi okanye kwingxoxo yeqela.
Kwezi meko apho kuye kwaqhagamshelwana nathi kwaye asifuni, Into yokuqala yokwenza kukucofa u "spam". Umyalezo obonakala phezulu kwincoko entsha evulwe nguloo mntu. Eli nyathelo libhloka umsebenzisi kwaye likwazise iTelegram. Ukuba abanye abasebenzisi bakwanika ingxelo yomnxeba njengogaxekile, iakhawunti yakho iya kuncitshiswa okwexeshana okanye ngokungapheliyo.
Ukuba sifuna ukuvimba umsebenzisi ongadibananga nathi okanye osele enze njalo kodwa khange simnike "ugaxekile", ngokulula Kuya kufuneka siye kuseto lweTelegram> Ukhuseleko nemfihlo> "Abasebenzisi abathintelweyo". Apho sinokongeza ezintsha, okanye sihlele ezo sele zivaliwe. Singayenza nakwingxoxo okanye kulwazi lomsebenzisi oxeliweyo, esifikelela kulo ngokunqakraza kwifoto yabo yeprofayile. Siza kubona ukhetho "lokuvimba umsebenzisi" ngombala obomvu apha ngezantsi.
Sinokuxela amajelo kunye namaqela njengogaxekile. Ngalo naliphi na ixesha, ukuba singena kwiqela okanye kwisitishi, ngokunqakraza kwigama, kuya kuvela imenyu esinokuthi "sixele" kuyo. Nje ukuba kwenziwe oku, iya kusisusa kwiqela okanye kwisiteshi, apho bangayi kuba nakho ukusongeza kwakhona. Ukuba uyazisola ngokunqakraza "ingxelo", kufuneka bakuthumelele ikhonkco lesimemo kwaye balamkele ukuze baphinde bangene.
Ewe kunjalo, Unako kwakhona ukuvimba i-bots.
Kwenzeka ntoni xa ndivimba umntu?
Xa uvimba umnxibelelwano, bona ayisayi kuphinda ikwazi ukukuthumelela imiyalezo (akukho zingxoxo ziyimfihlo), akukho fowuni. Ayizukukwazi ukongeza kumaqela. Yintoni egqithisile, Abayi kuba nako ukubona iprofayile yakho okanye imeko yakho kwi-intanethi (Ngaba uyakuhlala uvela njengo "gqibela kudala"?
Ndazi njani ukuba ndibhlokiwe?
Akukho ndlela yokwazi ngokuqinisekileyo, kodwa kusoloko kukho imiqondiso. Xa uvaliwe kwenzeka kuwe oko imiyalezo oyithumelayo iyakuhlala ishiyeke ithiki. Awuyi kuba nakho ukubona umfanekiso weprofayili (leyo, ukuba ubonile ngaphambili, luphawu olucacileyo lokuba uvinjiwe) kwaye Awuyi kuba nakho ukwazi ixesha labo lokugqibela kunxibelelwano. Ewe, yinto efanayo eyenzekayo xa ubhloka umntu, kodwa ubonwa kwelinye icala.
Uyazi njani ukuba iakhawunti yakho ithintelwe kwaye kufuneka wenze ntoni?
Kungenzeka ukuba utshixe kwiakhawunti yakho kwaye awuvumelekanga ukuba ubhalele abantu ongabaziyo, wenze kwaye umeme abantu kwiziteshi nakumaqelanjl. Kunqabile kakhulu ukuba babeka umda kwiakhawunti yakho ngokusetyenziswa kwesiqhelo, kodwa ukuba siya kude kakhulu, umzekelo, ukudala amaqela kunye nokongeza abantu kwiqela ngaphandle kwemvume yabo, kunokwenzeka ukuba iakhawunti yethu yeTelegram iya kuncitshiswa.
Ukusikelwa umda kunokuba yinto yexeshana, usuku olunye, iveki enye, okanye kungabinasiphelo (ngonaphakade) Nangeyiphi ndlela, Kuya kufuneka unxibelelane ne-bot @spambot (enye yeeakhawunti ezimbalwa eziqinisekisiweyo oza kuzifumana kwiTelegram). Uya kukuxelela yonke into malunga nebhloko yakho kwaye ungakhalaza ukuba ucinga ukuba ayilunganga okanye ibe yimpazamo.
Ngalo naluphi na olunye uhlobo lwengxaki, ukuthandabuza okanye umbuzo onxulumene neTelegram, unoluhlu lwe imibuzo ebuzwa rhoqo kwaye, ukuba konke okunye kusilele, khumbula oko Inenkxaso yomsebenzisi emangalisayo. Ukusuka kuseto lwazo naziphi na ii -apps zakho zeTelegram, cofa ku "Buza umbuzo" kwaye amavolontiya enkxaso yeTelegram aya kukuphendula.
Khuphela | Umnxeba X
Khuphela | yocingo
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » Konke malunga neebhloko kwiTelegram
Ukuba ndiyayifihla inombolo yam yeselfowuni kwitelegram, ndize ndithumele umyalezo kumntu okwi-telegram, ngaba lo mntu angandibamba ukuba andinayo inombolo efihliweyo?
Ukuthengiswa kwe-iPhone "ehlaziyiweyo" kuyanda kwaye kuchaphazela iitheminali ze-Android
Ukusasazeka, yenye yezonaapps zilungileyo zokumamela iipodcast, ihlaziywa ngeendaba ezinomdla